Manchester United oo iska lumisay fursad muhiim ah - Tilmaan Media
Manchester United oo iska lumisay fursad muhiim ah
Manchester United ayaa iska lumisay fursad ay ugu gudbi laheyd afarta sare ee horyaalka kaddib markii ay bar-barro 2-2 ah la gashay naadiga Southampton oo ay wada cayaareen.
Kooxda Southampton ayaa heshay goolka furitaanka ciyaarta iyadoo ciyaaryahanka Stuart Amstrong u dhaliyay goolkaas daqiiqaddii 12-aad ee ciyaarta.
Laacibka Manchester ee Marcus Rashford ayaa soo bareejeeyay daqiiqaddii 23-aad taas oo natiijada ka dhigtay 1-1.
Hayeeshee gool kale oo aan soo daahin ayey heshay United waxaana shabaqa dhex dhigay Anthony Martial ciyaarta oo mareysa 23 daqiiqo, sidaasna waxaa ku soo dhamaatay qeybtii hore ee kulnak 2-1 oo Man Untited ku hoggaamineyso.
Balse gunaanadkii ciyaarta ayaa gool looga naxsaday Manchester taasi uu shabaqa soo taabsiiyay ciyaaryahanka Southampton ee Obafemi oo isagu bedde ku soo galay, goolka uu dhaliyay ayaa ku soo aaday waqtiga dhimashada daqiiqaddii 90-aad, sidaas ayey natiijadu ku noqotay 2-2.
Raysal wasaare Khayre oo Dhuusamareeb gaaray
WHO oo walwal kamuujisay kiisaska karona ee xawaaraaha ku socda dunida